Taorian’ny fihaonana teo amin’izy ireo sy ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny sekoly tsy miankina no nandraisany fanapahan-kevitra, hoy i Todisoa Andriamampandry, tale jeneraly eo anivon’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena omaly. Antony roa no nandraisan’izy ireo ny fanapahan-kevitra dia noho ny aretina pesta nandalo teto amintsika sy ny fandalovan’ny rivodoza AVA ka tsy nahafahan’ireo mpianatra miisa 49.000 nanohy ny fianarany. Ny tanjona dia ny hahafahana mampitovy ny fari-pahaizan’ny mpianatra rehetra mialoha ny hiatrehan’izy ireo ny fanadinam-panjakana. Ho an’ny fanadinana CEPE, ohatra, dia nahemotra ny 11 aogositra ho avy izao raha tokony hotanterahina ny 31 jolay. Ho an’ny fanadinana BEPC kosa dia ny 3 ka hatramin’ny 6 septambra no hanatanterahana azy. Ny 23 sy ny 24 oktobra kosa ny CAEP arahin’ny fanadinana CAP/ EP ny 20 sy ny 21 novambra ho avy izao. Ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana no hanohy ny fianarany tsy mijanona mandritra ny roa herinandro entin’izy ireo hamenoana ny banga. Mikasika ny saram-pianarana volana aogositra moa dia nanambara ireo mpampianatra avy amin’ny sekoly tsy miankina fa hojerena izay marimaritra iraisana eo amin’ny roa tonta. Fantatra fa tsy hisy fiovana kosa ny datin’ny vakansy lehibe izay hanomboka ny 4 Aogositra ho avy izao…